Highlights & Promotion
This card is issued by and is the property of Ar Yu International Hospital. The benefit of membership privilege can be transferred to additional9honored guests who must be registered by the main member during the initial application process. Use of this card constitutes the acceptance of the terms and conditions of Ar Yu International Hospital by the card holder.
“ကျန်းမာပျော်ရွှင်၊ လုံခြုံစိတ်ချ သားသား၊ မီးမီးတို့၏ နေ့စဥ်ဘဝ” မိဘဖြစ်လာလျှင် သားသမီးများအတွက် အရာရာအကောင်းဆုံးပဲ ပေးချင်တာ မိဘတိုင်းရဲ့ ဆန္ဒဖြစ်ပါတယ် မိမိတို့၏ ရင်သွေးလေးများ ကျန်းမာရေးအတွက် ကြိုတင်စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သားသား၊မီးမီးတို့၏ နေ့စဥ်ဘဝကို ကျန်းမာစွာ​ကျော်ဖြတ်နိုင်စေရန် အာယုအင်တာနေရှင်နယ်ဆေးရုံကြီးမှ “Healthy
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာ​ရေးကဲ့သို့ပင် စိတ်ကျန်းမာ​ရေး​ကောင်းမွန်ရန်လည်း အလွန်အ​ရေးကြီးလှပါသည်။ စိတ်ခံစားချက်များ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်အ​ခြေအ​နေများနှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆံ​ရေးများ​သည် စိတ်ကျန်းမာ​ရေး​ပေါ်တွင် များစွာသက်​ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့​ကြောင့် စိတ်ကျန်းမာ​ရေးပြသနာများကို ပိုမိုဆိုးရွားလာသည်အထိ ​စောင့်ဆိုင်းမ​နေသင့်ဘဲ ကြိုတင်စမ်းသပ်စစ်​ဆေးပြီး လက်ဦးမှုရယူ၍ ကုသမှုခံယူသင့်ပါသည်။ Mental Wellbeing Package ကျန်းမာ​ရေးစစ်​ဆေးခြင်းတွင် Psychology
အသည်း၊ သည်းခြေအိတ်၊ သည်းခြေပြွန်နှင့် ပန်ကရိယတို့အား မှန်ပြောင်းဖြင့် ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးကုသခြင်း (ERCP) ရောဂါအမည်တပ်၍မရနိုင်သောဝမ်းဗိုက်အောင့်ခြင်း– ပန်ကရိယရောင်ခြင်း– ပန်ကရိယကင်ဆာဖြစ်ခြင်းအသည်းကင်ဆာဖြစ်ခြင်း– သည်းခြေကင်ဆာဖြစ်ခြင်း– သည်းခြေပြွန်ပိတ်ခြင်း ( သို့) သည်းခြေကျောက်တည်ခြင်း – သည်းခြေပြွန် ( သို့) ပန်ကရိယမှအရည်များစိမ့်ထွက်ခြင်း–